Ukuqhubekeka kweKhadi letyala kunye nokuKhangela okuPhathwayo okuchazwe Martech Zone
NgoLwesibini, Meyi 20, 2014 NgoMvulo, Juni 29, 2015 Douglas Karr
Ukuhlawulwa kweselfowuni kuya kuba yindawo eqhelekileyo kunye nesicwangciso esiqinileyo sokuvala ishishini ngokukhawuleza kunye nokwenza iinkqubo zokuhlawula zibe lula kumthengi. Nokuba ungumnikezeli we-ecommerce onenqwelo yokuthenga epheleleyo, a umrhwebi ophuma eselfowuni (umzekelo wethu apha), okanye umboneleli ngenkonzo (sisebenzisa Iincwadi ezintsha Ukwenza i-invoyisi ngeentlawulo ezenziweyo), iintlawulo ezihanjiswayo sisicwangciso-qhinga esihle sokuvala umsantsa phakathi kwesigqibo sokuthenga kunye notshintsho lwangempela.
Ukuqala kwethu ukubhalisa, besimangalisiwe yindlela ekunzima ngayo ukuvuka sibaleke kwaye siqonde zonke iifizi ezinxulumene noko. Oko yayiyiminyaka embalwa edlulileyo… ngoku zonke-in-nye izisombululo ezinje IBluepay yenza lula inkqubo kunye nemirhumo enxulunyaniswa nokwamkela amakhadi etyala. Banikezela ngesikhokelo kubafundi bethu apha.
Nayiphi na inkampani eyamkela amakhadi etyala inethuba lokunciphisa iindleko ngokuthenga ngeenxa zonke kubanikezeli bamakhadi etyala kunye neenkqubo zokuhlawula. Zininzi iindlela ezahlukeneyo zokuqhubekeka kwintengiso, nganye inempawu ezahlukeneyo kunye neendleko. Khangela enye enika ukhuseleko oluphezulu, ukulungeleka okuphezulu, amaxabiso afikelelekayo, kwaye okona kubaluleke kakhulu ekusebenzeni kwayo. Iiprosesa zokuhlawula ziyahluka ngokwexabiso xa kufikwa kubungakanani bokusebenza, umthamo wentlawulo oyicwangcisayo kunye nokukwazi kwakho ukwazisa uphawu phakathi kwabathengi abanokubakho. Nje ukuba iinkqubo zakho zokuhlawula zihlawulelwe, awuyi kuba nexhala- ungagxila kwimveliso nakwizinto ozenzayo. UKristen Gramigna, i-CMO yeBluepay.
Ukuphuma kweselfowuni kusebenza kusetyenziswa isixhobo esiphathwayo somrhwebi ukuhambisa ulwazi lokuthengisa ngetyala, ukugunyazisa ikhadi, kunye nokuthumela irisithi. Sebenzisa i iakhawunti yomthengisi oshukumayo, ukuthengisa kudluliselwa ngombane kwigumbi lokucoca kwaye umthengisi ufumana imali yakhe kwiintsuku ezimbini okanye ezintathu kuphela. Olu luphuculo olukhulu malunga nexesha leentsuku ezingama-30 zokuchaphazeleka ezichaphazelekayo kwiziliphu zekhadi letyala. Abathengisi abasebenza ngaphandle kwesiza banokukhupha ukubuyiselwa kwemali ngokulula, nabo. Intlawulo ihlala ivela kwikhadi lomthengi ngaphakathi kweeyure ezingama-24.
Ukuqhubekeka kwamakhadi okuthenga ngetyala kunika amashishini inkululeko yokuphuma ngasemva kwekhawuntara yokuthengisa kwaye aye apho abathengi babo bakhoyo, nokuba kukwibala elifanelekileyo, kumnyhadala wesitalato, kwilori yokutya okanye nakwigumbi lokubonisa elikufutshane ekuphumeni kwakho. Isakhono sabathengisi sokwamkela amakhadi etyala kunye namatyala, naphi na apho bakhoyo, kuguqula iSitrato esiPhambili kunye nendlela abantu baseMelika abathenga ngayo.
Isango lokuhlawula vs Inkqubo yokuhlawula
Iindlela zokuhlawula kunye neprosesa yokuhlawula zizinto ezimbini zokudibanisa kwintlawulo. Njengomnini weshishini, ukhe wayiva le migaqo kwaye wazibuza ukuba yintoni umahluko. Kukho amaqela amane abandakanyekayo kuyo yonke intengiselwano yekhadi letyala:
Ibhanki efumanekayo ebonelela ngeenkonzo zokurhweba zomrhwebi
Ibhanki ekhupha ikhuphe ikhadi lekhredithi yomthengi okanye ikhadi lebhanki
Indima yeeprosesa zokuhlawula kunye neendlela zokuhlawula ziyahluka, kodwa nganye iyinto ebalulekileyo ekwamkeleni intlawulo kwi-intanethi.
Yintoni iProsesa yokuHlawula? -Ukwamkela amakhadi etyala kwishishini lakho, abathengisi baseta iakhawunti kunye nomnikezeli ngenkonzo yomthengisi njengeBluePay. Inkqubo yokuhlawula iqhuba intengiselwano ngokudlulisa idatha phakathi kwakho, umrhwebi; ibhanki ekhuphayo (okt, ibhanki ekhuphe ikhadi lakho letyala lomthengi); kunye nebhanki yokufumana (okt, ibhanki yakho). Inkqubo yokuhlawula ikwabonelela ngoomatshini bekhadi letyala kunye nezinye izixhobo ozisebenzisayo ukwamkela iintlawulo zekhadi letyala.
Yintoni iSango lokuHlawula? Isango lokuhlawula ligunyazisa ngokukhuselekileyo iintlawulo kwiiwebhusayithi zorhwebo. Yicinge njengendawo yokugcina intengiso ekwi-Intanethi kwishishini lakho. Xa ubhalisela iakhawunti yomthengisi, umboneleli wakho unakho okanye anganikezeli ngesango lokuhlawula.
Inkqubo yokuhlawula iVenkile yokuHlawula: Yeyiphi into endiyifunayo?
Ukusetyenziswa okuqhelekileyo kwesango yindawo yokugcina i-ecommerce kwi-intanethi. Ukuba awuyiyo ishishini le-e-yorhwebo, akunakudinga isango lokuhlawula. Iakhawunti esisiseko yomrhwebi inokuba yeyona ilungileyo. Khangela iakhawunti yomrhwebi enexabiso elifanelekileyo lokuqhubekeka kwentlawulo, inkonzo yomthengi engama-24/7, kunye nokuhambelana ne-PCI (umgangatho wokukhuseleka kwekhadi letyala).
Kwelinye icala, isango lokuhlawula mhlawumbi kwikamva lakho ukuba unayo okanye ucwangcisa indawo ye-e-commerce. Ayingabo bonke ababoneleli beakhawunti yomrhwebi onesango lokuhlawula. Abanye ababoneleli basebenzisa isango lokuhlawula lomntu wesithathu, elinokuba yingxaki xa unengxabano. Ngubani onxibelelana naye xa unengxaki?
Isango kunye neMirhumo yokuQhuba
Esinye sezizathu zokuba imibutho ikubekele ecaleni ukuphunyezwa kwenkqubo yokunikezelwa kwekhadi letyala kungenxa yemirhumo yokudideka. Kunganzima ukufumana intloko yakho ijikeleze zonke ezi ntlawulo zahlukileyo kwaye ugqibe ukuba ayifanele umbutho wakho. Olu luhlu lulandelayo lubandakanya ezona ntlobo zixhaphakileyo zeefizi zekhadi letyala.
Imirhumo yeakhawunti yomthengisi -Umrhwebi namphi na umntu okanye inkampani eqhuba ukuthengiselana ngekhadi letyala. Kananjalo, iakhawunti yokulungisa ihlala ibizwa ngokuba yiakhawunti yomrhwebi. Zonke iintlawulo zenziwa ngale akhawunti yezemali.
Imirhumo yexesha elinye Uninzi lweeakhawunti zomrhwebi ziza nolunye uhlobo lwemali yokuqala yokuseta. Le ntlawulo ingabhekiswa njengokuseta isango okanye umrhumo wesicelo. Ezinye iinkampani zifuna ukuhlawulwa kwesoftware okanye esinye isixhobo esisetyenziselwa ukuthengiselana. Ngaba usebenzisa inkqubo esekwe kwiwebhu okanye uqeshisa izixhobo zakho? Ukuba kunjalo, unokuba nentlawulo yenyanga endaweni yomrhumo wexesha elinye kwinkqubo okanye kwizixhobo.
Umrhumo we-akhawunti wenyanga Phantse yonke iakhawunti yomrhwebi iza nentlawulo yenyanga. Le ntlawulo ingabhekiswa njengeakhawunti, ingxelo, okanye umrhumo weengxelo. Ngokwesiqhelo, iirhafu zenyanga zikuluhlu lwe- $ 10 ukuya kwi- $ 30. Ukongeza kwimirhumo yenyanga, ezinye iiakhawunti zifuna umrhumo ophantsi wenyanga.
Imirhumo yokuthenga kunye nenqanaba lesaphulelo Intengiselwano nganye ihlala ineendleko ezimbini zokulungisa… i umrhumo wento (ngokubanzi le ntlawulo ikuluhlu lwe- $ 0.20 kunye ne- $ 0.50) kunye ne- Ipesenti yentengiselwano. Le ntlawulo ibizwa ngokuba ngu- izinga lesaphulelo. Amaxabiso esaphulelo ahluka kakhulu kwiiprosesa ezahlukeneyo, ikakhulu kuluhlu lweepesenti ezimbini ukuya kwezine. Uhlobo lwekhadi letyala kunye nendlela yokulungisa zombini zidlala indima kwinqanaba lesaphulelo. Uninzi lwemali yesaphulelo iya kwinkampani ekhupha ikhadi lekhredithi (okt iVisa, Fumanisa).
Ubunzima bokuthelekisa amakhadi kunye neenkonzo
Kunganzima kakhulu, ukuba akunakwenzeka, ukuthelekisa iifizi zeenkampani ezohlukeneyo kuba uninzi lwazo alunikisi mali yazo kwifomathi elula. Ndiqala ukucinga ukuba uninzi lweendlela zokungena kunye neeprosesa zikwenza ngenjongo!
Njengomzekelo, ngamanye amaxesha amaxabiso esaphulelo aqhekeziwe intlawulo yotshintshiselwano kunye nentlawulo yombutho olawula intengiselwano eyahlukeneyo. Izinto ezongezelelweyo ezinokuchaphazela umrhumo wentengiselwano zibandakanya oku kulandelayo:
Uhlobo lwekhadi elisetyenzisiweyo (okt ikhadi lekhredithi kuthelekiswa nekhadi ledebhithi)
Inkqubo yokwenza intengiselwano (okt ifakwe kwi-vs. swiped)
Uvavanyo lokuthintela ubuqhetseba (okt yile dilesi inye esetyenzisiweyo kwidilesi yamatyala yamatyala kunye nentengiselwano ethile?)
Umngcipheko onxulumene noko wentengiselwano (okt uninzi lweenkampani zikholelwa ukuba ukuthengiselana okugqitywe ngaphandle kokuswayipha ikhadi ngokomzimba kuyingozi ngakumbi)
IBluePay yi bonke-in-nye umboneleli, Banesango labo lokuhlawula elifumanekayo kubanini beakhawunti yomrhwebi. Isango leBluePay linokusetyenziswa kwindawo yokuthengisa kunye neswayipha yokufunda. IBluepay ikwahlanganisiwe kwiindidi ezininzi POS iinkqubo kwaye zinokuqhubekisa ukuthengiselana nge-PIN Sebenzisa isango lokuhlawula ukwenza ngokukhuselekileyo intlawulo edityanisiweyo kunokunciphisa iimpazamo, ukukhawulezisa ukuthengiselana, kunye nokwenza uxolelwaniso lula.
Ukuba awufuni ukutyala imali kwiitheminali, okanye ukuba awunayo iwebhusayithi ye-ecommerce, ungasebenzisa iBluePay yesango lesiphelo sendlela yokwenza inkqubo yokurhweba ixesha elide unonxibelelwano lwe-Intanethi.
PHAWULA: Khange sihlawulwe, kwaye asinabudlelane noBluepay… bebelungile ngokwaneleyo ukuba banikeze lonke ulwazi esilufunayo ukufumana le posi yebhlog!
tags: ibluepaySwayipha ikhadiikhadi lamatyalaimali yekhadi letyalaUkulungiswa kwekhadi letyalaikhadi ekufakwa imaliUkuthintela ubuqhetsebaukuphuma kweselfowuniintlawulo yesango lentlawuloPCIukuthotyelwa kwepciImali yokuqhubekekaIsiphelo sendlela
Juni 4, 2015 ngo-1: 08 AM
Oku kuchaza yonke into endifuna ukuyazi. Inqaku elihle!